အာလူးအချောင်းကြော် ( French Fries ) ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
အာလူးအချောင်းကြော် ( French Fries )
တကယ့် French Fries အစစ်တွေကတော့..လက်ညှိုးအရွယ်လောက်ရှိတတ်
ပြီး..အခွံခွါအထူ ၊အပါး၊အရှည် ညီနေအောင်လှီးထားတတ်ပါတယ်..။
ဈေးလည်းပိုကြီးတတ်ပါတယ်..ဘေးနားအစတွေကိုတော့..အားလူးခြေ လို.ခေါ်တဲ့ mash potato မှာအသုံးပြုတာကတော့..ဟိုလ်တယ်တွေနဲ.အဆင့်မြှင့်အနောက်တိုင်းဆိုင်
အာလူးတွေကို..မိမိလိုအပ်သလောက်..အတ်ို၊ အရှည် ၊ အထူ အပါး လှီးပြီးရေ
ပြီးရင် ဗူး( သို.) ပလပ်စတစ်အိတ်တွေနဲ.ထုပ်သိမ်းပြီးခဲသောအအေးခန်းမှာ
ဇလုံတစ်ခု ထဲမှာ စားပွဲတင်ဆားမှုန်. ၊ငရုတ်ကောင်းတို.နှင့်ခေါက်ပြီး..ချက်
ချင်းတည်ခင်းဧည့်ခံ ၊ သုံးဆောင်ပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်( သို.) ငရုတ်ဆော့စ်လေးနဲ.တွဲဖက်သုံးဆောင်ပါ။